China Sprayer နှင့် Mist Machine ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ Zhongmaohua
Ce အသိအမှတ်ပြုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်း ...
၁။ မီးခိုးနှင့်ရေအခိုးအငွေ့များကိုမတူညီသောအထူးတံဆိပ်များဖြင့်သိရှိပြီးမီးခိုးနှင့်ရေငုပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မီးခိုးမှုန်ရေမွှားပိုက်ကိုတပ်ဆင်ပါ၊ ကြီးမားသည်၊ မီးခိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုကောင်းပြီး၊ ရေမှုန်ရေမွှားအငွေ့ပိုက်ကိုတပ်ဆင်ပါ၊ ရေအခိုးအငွေ့အမှုန်များသည်အသေးစိတ်နှင့်တစ်သမတ်တည်းဖြစ်ခြင်း၊ အမှုန်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရေပေါ်မျောနေခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုသည်ကြာရှည်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ထူးခြားသည်။
2. အခိုးအငွေ့စက်မှထုတ်လုပ်သောအခိုးအမှုန်များ၏အချင်းသည် ၃၀ မိုက်ခရွန်ထက်နည်းသည်။ ပေါ့ပါးသောကြောင့်အလွန်တောက်ပသောအခိုးအငွေ့များသည်မြေထုဆွဲအားကြောင့်ထိခိုက်မှုနည်းသည်။ ရိုးရာမှုတ်ဆေးများထုတ်လုပ်သောမျက်ခုံးများကဲ့သို့မြေထုဆွဲအားကြောင့်လျင်မြန်စွာအခြေမကျပါ။ ၎င်းသည်ကောင်းစွာမျောပါ ၀ င်ပြီးပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လေထဲတွင်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ မီးခိုးများ၏ထိုးဖောက်မှု permeable အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း၊ ပြဇာတ်ရုံများ၊ ရထားလမ်းခရီးသည်တင်ကားများ၊ လေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ၊ ဘူတာ၊ လေဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ပန်းခြံများ၊ လူနေareasရိယာများ၊ အစိမ်းရောင်ခါးပတ်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းမှုစခန်းများ၊ မြေဖို့ရန်များ၊ ခြင်များ၊ ယင်ကောင်များ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသို့မဟုတ်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများ၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးခြင်း
3. မြူမှုန်မှိုင်းများကိုဝါဂွမ်း၊ ဂျုံ၊ ဆန်၊ ပြောင်းနှင့်အခြားကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်မှန်လုံအိမ်များ၊ သစ်သီးပင်များ၊ သစ်တောများ (စီးပွားရေးသစ်တောများ၊ မြို့ပြဥယျာဉ်များ၊ ပန်းပွင့်ပျိုးခင်းများ)၊ ; areaရိယာကျယ်ပြန့်ကျက်စားရာနေရာများတွင်ရောဂါနှင့်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ခြင်း၊
ရှေ့သို့ Disposable Disposable Medical Protective အဝတ်အစား
နောက်တစ်ခု: Custom China Disposable Factory လက်ကားမဟုတ်သော 3ply Face Mask